Esi ayisisiCwangciso seNtengiso sempembelelo, Yiyeke! | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 22, 2017 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Kukho ingxolo eninzi kumajelo asekuhlaleni kangangokuba ngamanye amaxesha kunzima ukuqhubeka. Ndiyayithanda inyani yokuba ndinabalandeli abaninzi abakwi-intanethi kwaye ndizama ukubandakanya nokuphendula kuwo wonke umntu owenza isicelo. Xa iyinkampani endikhe ndanxibelelana nayo ngaphambili, ndenza ixesha kwaye ndiphendule ngokufanelekileyo.
Oko kwathethi, kukho iqhinga elibi eliqala ukuvela kwi-intanethi elitya ixesha lam kwimiyalezo ethe ngqo kunye nemiyalezo ejolise kuyo. Iinkampani zipapasha izicelo ezizezam kum ezinje ngezantsi ukundenza ndiphendule okanye ndibelane nabaphulaphuli bam. Andiqinisekanga nokuba zizenzekelayo okanye zenziwe ngesandla, kodwa ziyacaphukisa- kwaye ndiyabazisa.
Nanku omnye umzekelo apha ngezantsi. Ndikwafumana itoni kwezi kwiinkampani ezahlukeneyo ngokuthumela umyalezo ngqo kunye ne-imeyile ngokunjalo. Ndilisusile igama le-arhente kuba zihlala zifikelela kumxholo obalaseleyo ofanelekileyo kubaphulaphuli bethu. Le tweet ingezantsi; nangona kunjalo, ayisiyiyo enye yale miyalezo. Bendingancokoli malunga ne-Snapchat, khange ndicele ngcebiso nakubani na malunga ne-Snapchat, kwaye andikhathali nge-Snapchat inqaku lakutshanje.
Kutheni le nto esi siCwangciso esiShukumisayo seMpembelelo?
Esi sisilumkiso esenzelwe wena kunye ngqo nesithathile esithathe ingqalelo yam komnye umsebenzi. Imimango ye-imeyile yinto enye, ndiza kuzijonga ngexesha lam kwaye ndiphendule okanye ndicime njengoko kufanelekile. Nalu ulinganiso (lokwenene):
Imeko A: Ndihleli edesikeni yam ndisebenza, kwaye inqaku le-imeyile elininzi lingena. Kunye nesandi kweminye imiyalezo evela kubaxhasi kunye nethemba. Akukho namnye kubathumeli abalindeleyo ukuba ndiphendule ngokukhawuleza, nangona. Xa ndifumana ithuba lokujonga i-imeyile, ndiyazijonga kwaye ndiphendule ngokufanelekileyo.
Imeko B: Ndihleli edesikeni yam ndisebenza, kwaye uyandiphazamisa, undibuze ukuba ndinomdla kwisihloko endingazange ndathetha nawe ngaso. Ngoku, uninzi lwabantu olundiphazamisayo lunento ebalulekileyo yokubuza ukuba luqonde ukuba ixesha lam lixabisekile kwaye lolona vimba kunqabileyo. Abayi kuhamba nje bangene.
Olu hlobo lokujolisa lutshitshisa ixabiso lexesha lam kwaye lindisusa ebantwini abafuna ukuthetha nam okanye abafuna uncedo lwam.
Ukuba ucinga ukuba esi sisicwangciso sentengiso esinefuthe elifanelekileyo- ukufikelela ngaphandle kunye nokuphazamisa kum yonke imini-uyaphosisa. Nceda ulihloniphe ixesha lam. Ukuba uza kufikelela kum buqu kwimithombo yeendaba, yenze xa ndivula umnyango wale ncoko. Ngaphandle koko, papasha umyalezo wakho njengesiqhelo- ngaphandle kokundimaka.
Ukuze usebenze nabantu abaneempembelelo, kufuneka wakhe ubudlelwane kunye nathi. Ndidinga ukuthemba ukuba ujonge izibonelelo zam kwaye awuzukubeka abalandeli bam emngciphekweni. Yi le ayisiyo iqhinga lokuthengisa elinempembelelo.
tags: ukuthengisa okunempembeleloImidiya yokuncokolaweposiumyalezo we-twitter